Ndege Diki Inobondera Mudzimba dzevavakidzani: 2 Vakafa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Ndege Diki Inobondera Mudzimba dzevavakidzani: 2 Vakafa
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Inouraya Ndege Njodzi
Ndege diki yadonha muSantee, guta remuguta muSan Diego County, California, masikati ano, Muvhuro, Gumiguru 11, 2021. Vanenge vaviri vanozivikanwa vafa.
A Cessna 340A yakarovera mudzimba mbiri munzvimbo yemudhorobha ichiuraya vanhu vese vari muchikepe.
Kutanga vapindura vari kuyedza kuvimbisa kuti hapana munhu akaurayiwa mudzimba dzakapunzirwa. Vagari vaviri vakaendeswa kuchipatara mushure mekutiza imwe yedzimba.
Nzvimbo yekubuda kwenguva pfupi yakagadzwa neRed Cross.
The ndege yakadonha mudzimba mbiri pakona yaJeremy neGreencastle mumigwagwa nguva dza2: 12 manheru ndege iyi yaive Cessna 15A uye hurongwa hwayo hwekubhururuka hwaibva kuYuma, Arizona, kuenda kuMontgomery Gibbs Executive Airport muKearny Mesa, sekutaura kweCommunity of San Diego.
Vakuru vakati havasati vaziva kuti vanhu vangani vaiva mundege, asi kuti vaitenda kuti kukuvara kwacho "hakuna kurarama." Kutanga vapindura vari kushanda kuti vasimbise kuti avo vari mukati memhuri dzakakanganiswa vakakwanisa kubuda zvakanaka.
Muvhidhiyo yaSkyFOX, injini dzemoto dzinogona kuonekwa dzichisimudza dzimba mbiri dzakaparadzwa mutsaona. Heartland Moto & Kununura vakati imba yechitatu yakakuvadzwa, uye vashandi vezvinhu zvine njodzi vakaendeswa kunzvimbo iyi. Zvairatidza kuti rori yebhokisi yakarohwawo.
Mumwe murume aive pachiitiko akaudza FOX 5 kuti akafonerwa nemuvakidzani achiti amai vake nababa vakamhanyiswa kuchipatara. “Handizive kukura kwekukuvara kwavo. Ini ndinoziva kubva mukutaura kune vamwe vevavakidzani kuti kwaive kwakawanda bundu nemaronda. Ndinofunga vaive nerombo rakanaka vaive kumashure kweimba pazvakaitika nekuti yakauya kumberi. Michael, muvakidzani, akaburitsa amai vangu nepahwindo rekumashure uye baba vangu vekurera vaive kuseri kwemba saka vakapaza fenzi kuti vabudiswe. "
Inowanikwa chete mabhuroko maviri kumadokero kwetsaona iri Santana High Chikoro, uko vadzidzi vese vakachengeteka, sekutumirwa pa Twitter. Vadzidzi vaiburitswa kuti vaende kumba kana masikati, zvinoenderana neMuvhuro kirasi mashedhi.
Nzvimbo yekubuda kwenguva pfupi yakagadzwa neAmerican Red Cross kuCameron Mhuri YMCA pa10123 Riverwalk Drive mu Santee.
Chikonzero chekupunzika chiri kuongororwa.